Career ပြောင်းဖို့ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် – How She Did It
BlogCareer-loving WomenPopular Articles |
သားသမီးရလာတဲ့အခါ အရင်အလုပ်ပြန်မလုပ်ချင်တော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုချိန်ကျမှ အလုပ်အကိုင်အပြောင်းအလဲလုပ်လို့ ဖြစ်ပါ့မလား? အခုအရွယ်မှာ career အသစ်စတင်လို့ လွယ်ပါ့မလား? – လို့တိုင်ပင်ကြတယ်။
လွယ်တာတော့ ဘယ်အရာမှမလွယ်ဘူးဆိုတာ သေချာတယ်။ မိခင်တစ်ယောက်အနေနဲ့တင်မဟုတ်ဘူး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရယူနိုင်ဖို့က ဘယ်နေရာမှာမဆို လွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် လွယ်တာကိုတော့ ရွေးမလုပ်စေချင်ဘူး။ လွယ်လို့လုပ်လိုက်တဲ့အရာက ကိုယ်မလုပ်ချင်တာဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်လည်းမကောင်းသလို၊ လုပ်ငန်းအတွက်လည်းမကောင်းဘူး။ ပြီးတော့ ဘယ်အရွယ်မှာမဆို career ပြောင်းတယ်ဆိုတာ နောက်မကျဘူးလို့ ကျွန်မယုံကြည်တယ်။ စနစ်တက်လုပ်တတ်ရင် စိတ်ကျေနှပ်မှုရတဲ့ အလုပ်အကိုင်တစ်ဖြစ်လာနိုင်သလို၊ အရင်အလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ထက် အများကြီးသာနိုင်တယ်။
ဒါဆို Career Change တယ်ဆိုတာဘာလဲ?
Career change တယ်ဆိုတာ အလုပ်ပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီ company မှာမပျော်လို့ နောက် company ကိုပြောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ ဥပမာ – လူတွေအများကြီးနဲ့ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုပြီး ရောင်းရတဲ့ B2C sales (Business to Consumers) အလုပ်ကိုလုပ်ကိုင်ရတာ မပျော်လို့ လုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ရောင်းရတဲ့ B2B (Business to Business) အလုပ်အကိုင်ကိုပြောင်းတာဟာ Career Change တာမဟုတ်ပါဘူး၊ Job Change တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Sales ကိုမကြိုက်လို့ HR ကိုပြောင်းတာဟာ Career Change တာပါ။ ဝန်ထမ်းဘဝကနေ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းစတင်တာဟာ Career Change တာပါ။ ဆရာဝန်ဘဝကနေ Life Coach ဘဝကိုပြောင်းတာဟာ Career Change တာပါ။ အဓိက,က အလုပ်အကိုင်နယ်ပယ် ပြောင်းလဲခြင်းကိုဆိုလိုတာပါ။
ဘာကြောင့် Career Change ကို လူတော်တော်များများက အားမပေးကြလဲဆိုတော့ ပြန်ပြီးလေ့လာရမယ့်အရာတွေအများကြီးရှိလို့ပါ။ အထူးသဖြင့် Industry knowledge လို့ခေါ်တဲ့ အလုပ်အကိုင်နယ်ပယ်နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ ဗဟုသုတာတွေကို ပြန်ပြီးလေ့လာဖို့လိုတော့ အချိန်ထပ်ပေးရတာကြောင့်၊ အတွေ့အကြုံတွေထပ်ပြီးတည်ဆောက်ရတာကြောင့်၊ အချိတ်အဆက်တွေ ထပ်ပြီးရယူဖို့လိုတာကြောင့် မပြောင်းသင့်ဘူးလို့ပြောကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာက အသက်ကိုအရမ်းကြည့်တာကြောင့် ဘာလုပ်လုပ်နောက်ကျတယ်ဆိုတာပဲ ပြောတတ်ကြတာကြောင့် ဒီအချက်ကိုတော့ အဓိကထား စိတ်ဆင်းရဲခံပြီး ထည့်မစဉ်းစားစေချင်ဘူး။ အသက်ဆိုတာ ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး၊ အရည်အချင်းဆိုတာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ အမြဲရှိတဲ့အရာ။ ကိုယ်လေ့လာရင်လေ့လာသလို၊ လုပ်ရင်လြပ်သလိုတက်တဲ့အရာ။ ကျွန်မရဲ့အမြင်ကတော့ ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ် အမြဲမပျက်သင်ယူရမှာချင်းအတူတူ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အရာကို သင်ယူလုပ်ဆောင်ခြင်းက ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိစေတတ်စေတဲ့နေရာမှာ အရမ်းမြန်စေတယ်။ ပြီးတော့ အရင်ကသိခဲ့တတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေက ဆက်ပြီးအသုံးဝင်ပါတယ်။ အစကနေပြန်စရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို ကိုယ်ကိုတိုင်ယုံကြည်ပြီး လက်တွေ့လုပ်နိုင်ဖို့ပဲလိုပါတယ်။
ဘာကြောင့် Career Change ချင်တာလဲ?
၁ – Work Arrangement – အခုလက်ရှိမိခင်ဘဝမှာ ယူရတဲ့တာဝန်နဲ့အချိန်က အရင်ကအလုပ်နဲ့ ဘယ်လိုမှမကိုက်ညီတော့တာ။ ကိုယ်ကအရင်က ခရီးခဏခဏထွက်ရတဲ့ အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် အခုသားသမီးရလာတဲ့အခါ ဘယ်လိုမထွက်ချင်ဘူး၊ ထွက်ဖို့စိတ်မချဘူးဆိုတာကြောင့်လား …
၂ – Passion – ကိုယ်အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ရ ဆယ်တန်းအမှတ်နဲ့ရတဲ့ တက္ကသိုလ်ကိုတက်ပြီး အဆင်ပြေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ အခု လူလတ်ပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါ ဘဝနဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံအရ ကိုယ်စိတ်ပါဝင်စားတဲ့အလုပ်အကိုင်ကိုသိလာတယ်၊ တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ လေ့လာစည်းပူးရင်း ပိုပြီးစိတ်ကျေနှပ်မှုရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်ကို ပြောင်းချင်တယ်ဆိုတာကြောင်လား …
၃ – Career Development – ကိုယ်အရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်အကိုင်က တိုးတက်မှုအလားအလာမရှိဘူး၊ မကြာခင်ပျောက်သွားတော့မယ့်အလုပ်အကိုင်မျိုးကြောင်လား …
ဒီထက်မကတဲ့အကြောင်းအရာတွေ အများကြီးရှိသလို၊ မိခင်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကလည်း အခြေအနေတွေ၊ အကြောင်းပြချက်တွေ မတူနိုင်ဘူး။ ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲဆိုတာ သေချာသုံးသပ်နိုင်အောင် လာမည့် ဗုဒ္ဓဘူးနေ့မှာပြုလုပ်တဲ့ Career Talk for Moms မှာ –
-> ပြောင်းသင့်မပြောင်းသင့် ဘယ်လိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်မလဲ?
-> ပြောင်းမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအလုပ်အကိုင်မျိုးကိုစဉ်းစားသင့်လဲ၊ ဘယ်လိုရှာရမလဲ? (Top5Career Trends)
-> ကိုယ်မှာရှိပြီးသား အရည်အချင်းတွေ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို career အသစ်မှာအသုံးဝင်နိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲ?
-> career change ကို ဘယ်လိုစနှစ်တကျလုပ်နိုင်မလဲ?
မေမေတွေရော career change လုပ်ဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါ ဘယ်အချက်တွေက အခက်အခဲဖြစ်စေလဲ?
#HowSheDidIt #CareerTransitioning #CareerTalkForMoms